Daacish oo baahisay magaca ninkii fuliyay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee Boosaaso - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDaacish oo baahisay magaca ninkii fuliyay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee Boosaaso
May 25, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Abu Qadaama ninkii fuliyay weerarkii ismiidaaminta ahaa oo habeenkii Talaadada ka dhacay magaalo xeebeedka Boosaaso. [Xigashada Sawirka: Site Intelligence]
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowladda Islaamiga sidoo kale loo yaqaan Daacish ah ayaa baahisay ninkii fuliyay weerarkii ismiidaaminta ahaa oo habeenkii Talaadada ka dhacay magaalo xeebeedka Boosaaso, sida ay daabacday wakaalada wararka Daacish.
Sida ay daabacday wakaalada wararka Daacish ee Acmaaq, ninka weerarka fuliyay ayaa magaciisa la oran jiray Abu Qadaama kaasoo dhalasho ahaan kasoo jeeda gobolka Gedo ee Soomaaliya.
Acmaaq ayaa ku warantay in Abu Qadaama uu kamid ahaa dagaalyahanada Daacish ee gudaha Soomaaliya.
Ugu yaraan afar qof ayaa ku geeriyootay weerarka ismiidaaminta ah oo lala eegtay bar kantarool ay ciidamada Puntland ku lahaayeen meel u dhow isgoyska Towfiiq ee gudaha magaalada Boosaaso.
Wuxuu ahaa weerarkii ugu horeeyay oo ismiidaamin ah oo Daacish ay ka geysato gudaha Soomaaliya.
Maleeshiyada Daacish oo ku dhuumanaysa deegaanada buuralayda ah ee gobolka Bari Puntland ayaa horey waxay u kamid ahayd ururka Al-Shabaab kahor inta aysan ka bixin dabayaaqadii sanadkii 2015-kii.
Boosaaso-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta oo Khamiis ah tagay magaalo ganacsiyeedka Boosaaso, halkaas oo uu ku qaabilay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. Ujeedka safarkiisa ayaa ah sidii labada maamul [...]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Axad ah kulan kula yeeshay magaalada Gaalkacyo haweenka gobolka Mudug. Kulanka ayaa waxaa ka qaybgalay xubno ay kamid ahaayeen, marwada kowaad ee Puntland Hodon [...]